नालीको फोहोरमा बे’वारिसे शि’शुको श’व भेटियो, कस्ले फाल्याे ? पुरा पढ्नुहोस् – Onlines Time
नालीको फोहोरमा बे’वारिसे शि’शुको श’व भेटियो, कस्ले फाल्याे ? पुरा पढ्नुहोस्
January 4, 2021 onlinestimeLeaveaComment on नालीको फोहोरमा बे’वारिसे शि’शुको श’व भेटियो, कस्ले फाल्याे ? पुरा पढ्नुहोस्
उदयपुरको कटारीमा नवजात शिशुको शव बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको छ । कटारी नगरपालिका-४ स्थित बसपार्क नजिकैको नालीमा भर्खरै जन्मिएको बच्चाको शव फेला परेको हो । नालीको फोहोरको बीचमा भेटिएको उक्त बच्चाको शवबारे इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीले छानविन गरिरहेको डिएसपी हेमन्त भण्डारीले बताए ।
शवको प्रहरीले मुचुल्का तयार गरी पोष्टमार्टमका लागि कटारी अस्पतालमा राखेको उनले जानकारी दिएका छन् । अवैध रुपमा बच्च जन्मिएपछि फालेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । बच्चाको आमाको पनि खोजी गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । purbelinews बाट साभार गरिएको हो
सडक संघर्षमा जान सभापति देउवालाई मनाएर आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु गरिएको थियो । बैठकअघि देउवासहितका पार्टी पदाधिकारी, पौडेल, सिटौलासहितका नेताहरूबीच पार्टी कार्यालयमै भएको अनौपचारिक छलफलमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको थियो । त्यहीं तय भएको कार्यक्रमलाई पछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । कांग्रेसले पुस २५ गते शनिबार ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ ३ गते ७ सय ५३ पालिका र माघ ८ गते देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । जिल्ला र पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले केन्द्रसँगको समन्वयमा छुट्टै कार्यक्रम तय गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
आन्दोलनमा जान तयार भए पनि संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउन भने सभापति देउवा हच्चेका छन् । उनको असहमतिकै कारण पार्टीले संसद् पुनःस्थापनाको विषय निर्णयमा उल्लेख गरेको छैन । वरिष्ठ नेता पौडेलले ‘मोइ माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ काम किन गर्ने भन्दै निर्णयमै पुनःस्थापनाको विषय उल्लेख गर्न दबाब दिएका थिए । पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले असंवैधानिक कदमविरुद्ध पार्टी संघर्षमा उत्रिसकेपछि त्यसलाई सच्याउने कुरा स्वतः आउने कान्तिपुरलाई बताए ।
‘अबको आन्दोलन सशक्त हुन्छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्धको आन्दोलन भन्नुको अर्थ त्यसलाई सच्याउनु हो । त्यो भनेको संसद् पुनःस्थापनाकै लागि हुने आन्दोलन हो । अदालतलाई पनि हाम्रो यही अपिल छ,’ पौडेलले भने, ‘संसद् पुनःस्थापनाले मात्रै संविधानलाई बचाउन सक्छ । पार्टीको संघर्ष पनि संविधान र लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई बचाउनेमा केन्द्रित छ ।’ सिटौलाले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदम भनिसकेपछि त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने नै कांग्रेसको धारणा रहेको बताए । ‘असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्नुपर्छ भनिसकेपछि संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्न नै खोजेको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई लिएर धेरै अन्योलमा पर्न पर्दैन ।’
सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी संगठनतिरको ध्यान, निर्वाचन आयोगको तयारीलगायतले वैशाखमा निर्वाचन हुने र संसद् पुनःस्थापनासमेत नहुने अवस्थाले राजनीतिमा कालो बादल मडारिरहेको आफूले देखेको बताए । ‘कालो बादललाई हटाउने उपाय नै आन्दोलन हो । कथंकदाचित निर्वाचन हुने नै भयो भने आन्दोलनलाई त्यतैतिर डाइभर्ट गरौंला । संसद् पुनःस्थापना भयो भने खेल्ने तपाईं नै (देउवा) हो, खेल्नुहोला,’ बैठकमा सिटौलाको भनाइ थियो, ‘तर अहिले आन्दोलनको विकल्प छैन । आन्दोलनले पार्टीको संगठन पनि बनाउँछ । संविधान र राजनीतिक व्यवस्थालाई बचाउने काम पनि गर्छ ।’
पौडेलले ‘तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर आन्दोलन गरेको र त्यही आन्दोलनले तपाईंलाई जेलबाट निकालेको’ भन्दै देउवालाई संसद् पुनःस्थापनाको विषय उठाउन डराउन नपर्ने बताए । त्यसको जवाफ दिँदै देउवाले आफूलाई आन्दोलनले नभएर अदालतले निकालेको बताएका थिए । पौडेलले असंवैधानिक कदम चाल्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संविधानको मातहत ल्याउनका लागि पनि संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताए । देउवाले पुनःस्थापनाको उच्चारण नगरीकनै प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध आन्दोलनमा जाने धारणा राखेका थिए ।
बैठकले संसद् विघटनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र दुईखाले धारणा नभएको जनाएको छ । केही मिडियाले गलत समाचार दिएको भन्दै कांग्रेसले खेद प्रकटसमेत गरेको छ । ‘संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एउटै निर्णय र प्रस्ट धारणासहित नेपाली कांग्रेस एकताका साथ आन्दोलनको मैदानमा छ,’ बैठकपछि कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गलत समाचारहरूप्रति खेद प्रकट गर्दै भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण नगरी पार्टी निर्णयका आधारमा समाचार सम्प्रेषणका लागि सबै सञ्चारमाध्यमलाई कांग्रेसको बैठक हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’
कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेसमा विलय भएका कार्यकर्ताहरूका लागि पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरणसम्बन्धी विवादसमेत टुंगाएको छ । पौडेल पक्षले समायोजनको नाममा महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो । बैठकले केन्द्रीय कार्यालयबाट सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएका र पठाउने प्रक्रियामा रहेका क्रियाशील सदस्यताका नामावलीलाई समायोजन समितिले अन्तिम टुंगो गरेबमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेका समायोजन समितिले विवादका विषयलाई अनौपचारिक संवादबाट शनिबारै हल गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव लगेको थियो ।
सुरु भयो अनलाइन बाटै पुनः श्रम स्वी’कृति लिने व्यवस्था, कति लाग्छ, कसरी लिने ? (जानकारीका लागि सेयर गराै)
कस्तो अ*चम्म ! ९६ वर्षका वृद्ध बुढा र ९६ वर्षकी वृद्धा बुढीले धुमधाम संग बिहे गरे (हेर्नुस् भिडियो)